Edgemesh: The ROI nke Ecommerce Saịtị Ọsọ dị ka Ọrụ | Martech Zone
N'ime ụwa asọmpi nke e-azụmahịa otu ihe doro anya: ihe gbasara ọsọ. Ọmụmụ mgbe ọmụmụ na-aga n'ihu na-egosi na saịtị ngwa ngwa na-eduga ụbara ọnụego ntụgharị, ụgbọala ụkpụrụ nlele nlele dị elu na na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa dịkwuo mma. Mana ịnye ahụmịhe weebụ ngwa ngwa siri ike, ọ na-achọkwa ma ihe ọmụma miri emi nke imewe webụ na akụrụngwa “ọnụ” nke abụọ nke na-eme ka saịtị gị dị nso na ndị ahịa gị dị ka o kwere mee. Maka saịtị e-azụmahịa, ịnye ahụmịhe arụmọrụ dị elu nwere ike isi ike karị - yana ọtụtụ ikpo okwu na ịdabere na ngwa ndị ọzọ na-ebuga mgbagwoju anya na 11.
Ịbanye n'ime oghere a bụ ntakịrị ama ama, yana ụlọ ọrụ "Speed ​​​​dị ka ọrụ" zoro ezo Edgemesh. Tọrọ ntọala na 2016, Edgemesh na-enye ọrụ nkwalite ngwa ngwa nke ahụ na-enye ike ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye ụfọdụ ahụmịhe ịntanetị kachasị ọsọ na webụ. Na nke a Martech pụrụ iche, anyị na-abanye miri emi n'ime ihe Edgemesh bụ, ka o si arụ ọrụ na ụdị arụmọrụ na-abawanye ndị ahịa na-ahụ na ikpo okwu osooso.
Kedu ihe bụ Edgemesh?
Na 2021, Edgemesh wepụtara ya Ihe nkesa Edgemesh ngwaahịa — ikpo okwu nkwalite ọnụ ọrụ zuru oke nke na-ebuga saịtị 30-70% ngwa ngwa n'ụzọ doro anya. Ihe nkesa Edgemesh, nke na-arụ ọrụ gafee netwọk nnyefe ọdịnaya abụọ (Cloudflare na ngwa ngwa), bụ ikpo okwu arụmọrụ zuru oke. Dị ka Edgemesh si kwuo, ihe nkesa na-ewe weebụsaịtị ọ bụla dị adị wee kwaga ya n'enweghị nsogbu na nsọtụ netwọkụ ma na-agbakwunye ọtụtụ nkwalite-nlegharị anya. More na nke dị n'okpuru.
Onye ahịa Edgemesh
Onye ahịa Edgemesh bụ ihe nchọgharị, ma ọ bụ akụkụ ndị ahịa, ngwangwa ngwangwa. Ndị ahịa na-agbakwụnye Client Edgemesh site na ntinye otu pịa ma ọ bụ site na ịgbakwunye otu ahịrị koodu na saịtị ha dị. Ngwa mgbakwunye dị ugbu a maka WordPress, Shopify na Cloudflare. Usoro nhazi ahụ dị mfe ma na-ewe ihe dị ka nkeji 5.
Site n'ebe ahụ, onye ahịa Edgemesh na-agbakwụnye atụmatụ abụọ: nleba anya nke onye ọrụ (iji gosipụta arụmọrụ saịtị dabere na ezigbo ahụmahụ ndị ahịa) na caching n'akụkụ ndị ahịa. Edgemesh na-agbakwụnye caching n'akụkụ ndị ahịa nwere ọgụgụ isi site na nhazi ndị ọrụ ọrụ-ihe nlereanya emebere iji kwe ka webụsaịtị rụọ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị. Nke a na-enyere aka ịbawanye ọnụọgụ ọdịnaya nke ihe nchọgharị ahụ nwere ike ijide na mpaghara, na-ebelata arịrịọ onye ahịa na sava n'onwe ya. Naanị nke a na-enye ngwa ngwa ihe onwunwe, mana anwansi sitere na mgbagha "pre-cache" ya.
Dabere na ezigbo mmekọrịta ndị ọrụ na metrik arụmọrụ, Edgemesh jiri amamihe gbasaa cache ihe nchọgharị iji hụ na ebugoro ọtụtụ akụ maka ndị ọrụ — na-echekarị ebe onye ahịa ga-aga na-esote yana na-agbalị ịnọrọ otu nzọụkwụ n'ihu. Enwere ike ịhụ mmetụta arụmọrụ na Portal Edgemesh, yana ndị ọrụ "Accelerated" bụ ndị cache n'akụkụ ndị ahịa nyere 10% ma ọ bụ karịa nke ibe ahụ, yana ndị ọrụ "Na-adịghị Accelerated" bụ ndị na-enweghị obere uru na ha. ihe nchekwa n'akụkụ ndị ahịa Edgemesh na-emepụta. Dabere na ezigbo ọmụmụ ihe ndị ahịa, onye ahịa Edgemesh na-enyere aka ịbawanye ọsọ saịtị site na 20-40%.
Edgemesh Acceleration arụmọrụ
Arụmọrụ ahịa ahịa Edgemesh
Arụmọrụ nkesa Edgemesh
Onye ahịa ahụ na-ejidekwa ma na-enye ike dị omimi nke data arụmọrụ. A na-anakọta data a site na ezigbo ndị ọrụ na webụsaịtị gị-ihe a na-akpọ data ubi. Enwere ọtụtụ ndị asọmpi na oghere a, gụnyere New Relic, App Dynamics na Datadog-mana Edgemesh Portal bụ maka igosipụta data arụmọrụ n'ụzọ enyochaburu nke anyị chọtara na-enweghị isi.
Dịka ọmụmaatụ, metric arụmọrụ ọ bụla nwere ọkwa akọwapụtara nke ihe a na-ewere ngwa ngwa, Nkezi na Slow (agba agba maka ịdị mfe) - na-enye onye ọ bụla ohere ịchọpụta ngwa ngwa mpaghara chọrọ nkwalite. A na-ejide metric arụmọrụ ọ bụla dị maka nyocha yana ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, ọdịdị ala ma ọ bụ ọbụna otu ibe nwere ike imebi arụmọrụ ya. Na mgbakwunye, ọnụ ụzọ ahụ na-egosi data oge ọkwa API-na-enye gị ohere ịhụ mmetụta scripts na ngwa ndị ọzọ nwere na arụmọrụ saịtị gị, ọzọ na njikọ ngwa ngwa iji gosi naanị ngwa ngwa.
Ihe nkesa Edgemesh
Ihe nkesa Edgemesh bụ ikpo okwu ngwangwa ọrụ zuru oke. N'adịghị ka Edgemesh Client, ihe ngwọta nke sava chọrọ usoro nbanye n'otu n'otu. Nke ahụ kwuru, mbugharị ahụ dị mfe n'otu aka ahụ - yana ndị ahịa na-emelite otu ndekọ DNS iji kwaga n'elu ikpo okwu Edgemesh.
Ihe nkesa Edgemesh na-anọdụ n'elu netwọk nnyefe ọdịnaya abụọ - Cloudflare na ngwa ngwa. Site na Edgemesh Server, ndị ọbịa kụrụ ụdị “ọnụ eje ozi” nke weebụsaịtị gị, na-ebelata nke ukwuu oge ewepụtara iji wepụta ibe ahụ. Na mgbakwunye, Edgemesh Server na-akpaghị aka na n'ụzọ doro anya na-enyere ọtụtụ tweaks arụmọrụ ọkwa ụlọ ọrụ, gụnyere:
Na-ebuli onyonyo n'ụdị ọgbọ na-abịa gụnyere AVIF
Na-akwalite protocol njikọ na HTTP/3 mgbe ọ dị
Na-ebuga ọdịnaya gaa na mmalite (ngalaba anaghị achịkọta)
Na-agbakwunye ntụzịaka mbugharị nwere ọgụgụ isi yana ibugharị ibe dị ike
Na-agbakwunye onye ahịa Edgemesh
Maka ụlọ ọrụ e-azụmahịa, Edgemesh Server na-enye ha ohere ịnọrọ n'elu ikpo okwu ha dị (dịka ọmụmaatụ Shopify) ma nweta uru arụmọrụ nke saịtị na-enweghị isi na-arụ ọrụ omenala. Site na oge ezumike ugbu a n'azụ anyị, Edgemesh kesara ihe atụ ụfọdụ nke arụmọrụ ha nwetara na Edgemesh Server:
Nsonaazụ ụwa n'ezie
Edgemesh nwere ọtụtụ ọmụmụ ihe dị na webụsaịtị ha, mana ha nyere ụfọdụ atụ nkọwa nke ma uru arụmọrụ yana nsonaazụ nsonaazụ na ọnụego mgbanwe. Dabere na data ewepụtara anyị nwere ike ikwenye-ihe gbasara ọsọ!
Rịọ ihe ngosi Edgemesh